रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - क्याप्सन
प्रसङ्ग मेनु घुसाउनुहोस् - रोज्नुहोस् क्याप्सन
हालको चयनका लागि क्याप्सन विकल्प सेट गर्नुहोस्
क्यापसन बर्ग चयन गर्नुहोस्, वा एउटा नयाँ बर्ग सिर्जना गर्नलाई एउटा नाम टाइप गर्नुहोस्। बर्ग पाठ क्याप्सन लेबुलमा क्याप्सन सङ्ख्या भन्दा पहिले देखापर्दछ। हरेक पूर्वपरिभाषित बर्ग उस्तै नामको एउटा अनुच्छेद शैली सँग ढाँचाबद्ध हुन्छ। उदाहरणका लागि, "उदाहरण" क्याप्सन बर्ग "उदाहरण" अनुच्छेद शैली सँग ढाँचाबद्ध हुन्छ।
क्रमाङ्कनको प्रकार चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँं क्याप्सनमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्थ्यो.
पाठ टाइप गर्नुहोस् जुन तपाईँं क्याप्सन सङ्ख्या पछि देखाउन चाहनुहुन्छ. उदाहरणका लागि, यदि तपाईँं आफ्नो वस्तुहरू लेबुल गर्न चाहनुहुन्छ "Object 1: Text", बिरामचिन्ह टाइप गर्नुहोस् (:), खाली स्थान र पाठ.
सङ्ख्या र क्याप्सन पाठ बीच देखिनेमा वैकल्पिक पाठ क्यारेक्टरहरू प्रविष्ट गराउनुहोस्.
चयन गरिएको वस्तु माथि वा तल क्याप्सन थप गर्नुहोस्. Tयो विकल्प केही वस्तुहरूका लागि मात्र उपलब्ध हुन्छ.
Title is: क्याप्सन